MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA CUNNADA COCKER SPANIEL DOG EE INGIRIISKA - EEYAHA
Macluumaadka iyo Sawirada Cunnada Cocker Spaniel Dog ee Ingiriiska
Eddie the English Cocker Spaniel oo jira 2 1/2 sano jir— 'Eddie waa dhab ahaantii dib u dhac Cocker. Isagu waa eey fiican oo shaqeeya, laakiin wali wuxuu jecel yahay salaax. '
Liiska Ingiriisiga Cocker Spaniel Mix Eeyaha Taranka
Ingiriisiga Cocker Spaniel waa eey dhexdhexaad ah oo is haysta. Madaxa waa la qaloocaa oo wax yar baa la siman yahay marka dhinac laga eego. Afku waa isla dhererka madaxa oo leh joogsi qeexan. Sanka waa madow ama bunni iyadoo ku xiran midabka jaakada. Ilkaha waxay ku kulmaan maqas ama qaniinyo heer ah. Indhaha dhexdhexaadka ah, ee ovalda ah waa bunni madow ama hazel eyda midabka midabka leh leh. Dhegaha ayaa hoos loo dhigay oo deldel dheer ayaa lagu daboolay timo jilicsan ama duufsan. Laabta ayaa qoto dheer lugaha horena waa toosan yihiin. Khadka sare ayaa ku dhowaad siman, wax yar ka fooraraya xagga hore iyo xagga dambe eeyga. Dabada ayaa badiyaa la soo xidhaa. Xusuusin: xirida dabada waa sharci daro qeybaha ugu badan Yurub. Cagaha bisadda u eg waxay leeyihiin suulasho adag oo fiiqan. Timaha waa dherer dhexdhexaad ah oo jirka ah laakiin gaaban oo ganaaxan madaxa. Waxaa jira baalal dhagaha, laabta, caloosha iyo lugaha. Midabada koofiyaddu waxay ku yimaadaan midab adag oo madow, beerka ama casaan ama midab leh midab cad oo leh madow, beerka ama calaamadaha casaanka ama shilinta. Midabyo badan ayaa la aqbali karaa, laakiin eeyaha midabka adag midab cad ayaa laga aqbali karaa oo keliya laabta. Mararka qaarkood waxaa jira calaamado midab leh oo ku saabsan madow, beerka ama eeyaha midabka leh. Eeyaha midabka badan leh waxaa badanaa loo yaqaan 'roans.' Waxaa jira roon buluug ah oo ah parti madow iyo caddaan ah halkaas oo timuhu isku dhex galaan iyagoo cad oo siinaya muuqaal buluug ah. Roan bunni, roan shukulaatada ama roonka beerka waa jaakad midabkeedu yahay bunni iyo cadaan midabkeedu yahay timo bunni ah oo ku dhex milmaya cadaanka Roan Oran, roan cas, ama roan strawberry waa jaakado midab casaan iyo cadaan leh oo leh timo casaan ah oo dhexgala timaha cad. Dharkaasi marmarka qaarkood waxay leeyihiin dhibco cagaaran. Waxaa jira laba nooc oo Cocker Ingiriis ah: goob iyo bandhig. Noocyada bandhigu waxay leeyihiin jaakado ka dheereeya duurka / noocyada shaqada.
Ingiriisiga Cocker Spaniel waa eey caqli badan, adag oo adag. Nolol, jaceyl iyo jacayl, wacan, jilicsan, ciyaar iyo kalgacal leh, waxay ku fiican yihiin carruurta. Iyagu waa kuwa wax iibiya celcelis ahaan, waxayna diyaar u yihiin kuna faraxsan yihiin inay dhageystaan ​​milkiilayaashooda. Ey wehel sare ah. Guud ahaan nooc ka baxa, oo shisheeyaha si fudud ugu qaata, shakhsiyaadka qaarkood waa la hayn karaa iyada oo aan ku filnayn is dhexgalka bulshada . Noocani wuxuu si fiican ugu fiicnaan karaa qoyska bisadaha . Waxaa jira laba nooc, khadadka xariiqda iyo khadadka bandhigga (keydka). Noocyada aagagga waxaa loogu talagalay ugaarsiga iyo shaqada tijaabada goobta. Nooca keydka ayaa loo kariyaa bandhigyada qaabeynta. Labada noocba waa firfircoon yihiin waxayna u baahan yihiin jimicsi maalinle ah, laakiin khadadka aagagga waxay leeyihiin heer tamar sare, waxayna u baahan yihiin xitaa jimicsi dheeri ah. Heerka xukunka ee noocani wuxuu ku kala duwan yahay xitaa isla qashinka isla. Waxay u nugul yihiin codka qofka mana dhageysan doono haddii ay dareemaan inay ka maskax adag yihiin milkiilahooda, hase yeeshe sidoo kale sifiican ugama jawaabi doonaan anshaxa adag. Haddii aadan ahayn nooca qofka soo bandhigi kara hawo dabiici ah oo xasilloon, laakiin awood adag, markaa hubi inaad doorato cunugga u hoggaansan. Dabeecada muuqaalka iyo khadadka duurka labaduba aad ayey u kala duwan yihiin, waxayna kuxirantahay sida milkiilayaashu ula dhaqmaan eeyga iyo inta iyo waxa nooca jimicsiga waxay bixiyaan. Shakhsiyaadkaas aan loo qaadan socod maalinle ah , loo oggol yahay inay rumaystaan ​​inay alfa ka sarreeyaan aadanaha iyo / ama ay yihiin loola dhaqmay sidii bini-aadam yar oo leh afar lugood waxay ku egtahay darajo kaladuwan akhlaaqda iyo / ama arrimaha dabeecadda . Shakhsiyaadkaas la siiyay qaabdhismeed joogto ah , deggan, maamul adag, oo leh xeerarka ayaa cadeeyay oo socod maalinle ah halka eyga laga sameeyo aad aadanaha agtiisa ama gadaashiisa waxay leeyihiin dabeecadaha ugu fiican.
Dhererka: Ragga 15 - 17 inji (38 - 43 cm) Dumarka 14 - 16 inji (36 - 41 cm)
Miisaanka: Ragga 28-34 rodol (13 - 16 kg) Dumarka 26 - 32 rodol (12 - 15 kg)
U nugul caabuqa dhagaha Xilliga kuleylaha, dhegaha waa in badanaa la hubiyaa. Iyagoo ku sii laadlaada dhulka sida ay yeelaan, waxay martigelin karaan shilinta ama burrsiga, badanaa sababta dhegaha la'aanta. Miisaanka si fudud uma badna.
Ingiriisiga 'Cocker Spaniel' wuxuu ku fiicnaan doonaa guri dabaq ah haddii si ku filan loo jimicsado. Waxay ku fiican yihiin ugu yaraan deyr dhexdhexaad ah.
The English Cocker Spaniel wuxuu ku raaxeeyaa jimicsiga inta aad karto oo dhan. Waxay u baahan yihiin in lagu qaado a socod maalinle ah , halka eyga looga sameeyo ciribta cirif ama dhabarka qofka haya hogaanka. Eeyaha loo oggol yahay inay ku hor socdaan bani-aadamka hortiisa dareen ahaan waxay aaminsan yihiin inay alfa ka sarreeyaan aadanaha, sida maskaxda eeyga, hoggaamiyaha baakadka ayaa ugu horreeya.
Shanlaynta joogtada ah iyo cadayashada jaakadda ayaa muhiim ah. Noocyada koofiyaddu way ku kala duwan yihiin nooca. Koodhadhka qaarkood waxay leeyihiin xaddi xad-dhaaf ah oo timo cudbi ah waxayna u nugul yahiin isku dheelitirnaanta, halka kuwa kalena ay yihiin kuwo xariif ah oo fidsan oo fidsan oo u nugul inay ku dheelmaan Maydh ama shaambo qalalan hadba sida loogu baahdo. Ka hubi dhegaha abuurka cawska iyo calaamadaha infekshanka. Si joogto ah u nadiifi dhukayga xad-dhaafka ah. Ku caday timaha cagaha xagga hoose ee suulasha dhexdooda oo ku hagaaji salka cagaha. Timaha jarjar suufka, laakiin yaanay u dhex marin suulasha. Caday burrsarrada iyo dhaldhalaalka kadib markii eeyga uu ku cayaaro meelaha cawska leh ama keymaha. Noocani waa celcelis daadiya.
Ingiriisiga Cocker Spaniel waa mid ka mid ah Isbaanishyada ugu da'da weyn ee la yaqaan. Markii hore loo yiqiin eey guud ahaan u eg isbaanish oo la soo geliyay England qarniyo ka hor, eeyaha waxaa loo kala qeybiyay toddobo nooc oo isbaanish ah: the Guga Ingiriisiga , ah Cocker Spaniel , ah Clumber , ah Sussex , ah Guga Welsh , ah Goob , iyo Biyaha Irish . Cocker iyo Springer Spaniels ayaa si wada jir ah u horumaray, iyaga oo cabirkoodu yahay uun kala soocaya ilaa 1892, markii ay Kooxda Kennel ee England u aqoonsatay inay yihiin noocyo gaar ah. Sanadkii 1946 Naadiyada Kennelka Mareykanka iyo Kanadiyaanka waxay u aqoonsadeen Ingiriis Cocker Spaniel inuu yahay nooc ka duwan kan Isbaanish Mareykan ah . Cocker Spaniel waa eey ugaarsi ugaarsi ku shaqeeya oo awood u leh inuu ka shaqeeyo dhul adag dhul qoyan iyo mid qalalan labadaba. Aad ugu fiican futada iyo soocelinta ciyaarta oo leh afka jilicsan. Waxay si fiican u dhageysataa amarrada. Magaca 'Cocker' wuxuu ka yimid qoryaha, shimbir ugaar ah eeyaha ayaa caan ku ahaa dhaqidda. Qaar ka mid ah hibooyinka Ingiriisiga 'Cocker Spaniel' waa ugaarsiga, daba-galka, dib u soo celinta, ilaalinta, feejignaanta iyo u hoggaansamida tartanka.
Ingiriis Cocker Spaniels AJ (bidix) iyo Tommie Lacono oo hal sano jira
Tommie Lacono Ingiriisiga Cocker Spaniel eey
spaniel Cocker qas dachshund for sale
Marmaduke waa 3 jir bulug ah oo Ingiriis ah Cocker Spaniel
Bleki wuxuu la wadaagayaa cunnadiisa saaxiibkiisa ugu fiican Cikita bisadda.
Ingiriis Cockers Kenny iyo Blue— 'English Cocker Spaniels waa nooc cusub oo aniga igu cusub waana ku faraxsanahay markaan ogaadey Cocker-ka Ingriiska inuu yahay nooc lagu daro qoyskeyga. Eeyadan yaryar waa kuwo majaajillo iyo xiiso-jecel, in kasta oo mararka qaarkood lagu habeeyo dadka iyo xaaladaha cusub. Si dhakhso ah ayey ula qabsadaan oo waxay umuuqdaan inay ku raaxaystaan ​​eeyaha kale, dabaasha iyo legdanka. Waxaan ku bilaabay mid laakiin waxaan ogaaday in Cocker-kayga uu umuuqday wax yar oo cidlo ah inkasta oo aan haysto eeyo kale. Markii aan bilaabay inaan guriga u keeno qashin qub si aan ugu ciyaaro taariikhaha ciyaarta waxaan ogaaday haybtooda dhabta ah. Muddo dheer ma aysan joogin ka hor in qashin-qubkaas uu aniga sidoo kale noqday. Kuwani waa eeyo yaryar oo adag oo ku raaxeysta waqtiga ciyaarta iyo koolkoolinta isla markaana si fudud loo tababbaray. Cunnadu aad ayey u dhiirrigelisaa sidaa darteed buskud gacantaada ku jira way ku raaci doonaan meel kasta! Waxaa lagu dhisay meel hoose laakiin waa mid adag oo aan la burburin karin. Waxaan si fudud ugu maleynayaa inay sifiican ugu fiicnaan lahaayeen carruurta. Xaqiiqdii waxay u ifiyaan dhalaalkooda markay labo-labo yihiin. '
Buluug Ingiriisiga Cocker Spaniel oo laftiisa ku calalinaya
Kenny madow iyo caddaan Ingiriisi Cocker Spaniel
Zoie sariirta sariirta ayuu ku joogaa 8 bilood jir Ingiriis Cocker Spaniel oo reer Hindiya ah.
Terry iyo Koky oo ah Ingiriis Cocker Spaniel eeyo - Terry waa 2 ½ bilood jir Koky waa 4 bilood jir.
Eeg tusaalooyin badan oo ah Ingiriisi Cocker Spaniel
Ingiriis Cocker Spaniel Sawirada 1
Ingiriis Cocker Spaniel Sawirada 2
Noocyada Cocker Spaniel
Ingiriis Cocker Spaniel Dogs: Sawirada Guryaha La Uruurin Karo
Boston weiner Pit isku darka eey
sawirada ingiriiska springer spaniels puppy
Jarmalka adhijirka chow chow mix
doberman pinchercher german adhijir isku dhafan eeyo